‘फोसिल’ अर्थात जिवावशेषः कुमार नगरकोटी – nepali bytes
January 14, 2018 January 27, 2018 nepali bytes	Comments
नगरकोटी सायद एकमात्र त्यस्ता लेखक हुन् जोसँग उनको कृतिको बारेमा प्रत्यक्ष छलफल गर्न पाएको छु । त्यसबेला उनको कृति पढेको थिएन । मोक्षान्तः काठमाडौँ फिवरको प्रकाशन पश्चातको छलफलको कार्यक्रममा बुकाहोलिक्सको बैठकमा उनीसँग भेट भएको थियो । उनको कथा बुन्ने शील्प र कथामा समावेश पत्र र सन्दर्भहरुका बारेमा धेरैले तारिफ गरेका थिए ।
‘सिन्डलरलाई नचिनेकोले नगरकोटीको कथाको स्वाद पाउन सक्दैन’
उनका समर्थकहरुले यस्तै यस्तै तर्क गर्थे । मैले उनलाई राम्ररी पढि नसकेकोले म उनको समर्थक हुँ कि होइन छुट्याउन सकि रहेको थिएन । त्यत्तिकैमा कुरा राख्ने पालो मेरो आयो । मलाई पुस्तकको गुदिको बारेमा थाहा नभएकाले त्यसका सन्दर्भमा बोल्ने आँटै भएन । त्यसैले पुस्तकको नाममा अलि आपत्ति जनाएँ ।
‘पुस्तकको नाममा अंग्रेजी नएर नेपाली नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?’
नेपाली साहित्यमा अंग्रेजी प्रयोगको म विरोधी हुँ । भाषा अंग्रेजी होस् या नेपाली शुद्ध बोलिनु पर्छ । म अंग्रेजी शुद्ध नबोल्दा पाखे हुने अनि नेपाली अशुद्ध बोल्दा ठूलो हुने भन्ने मान्यताको विरोधी हुँ । त्यसैले यो पुस्तक समिक्षामा पनि मेरो पूर्वाग्रहले केहि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । समिक्षा भन्दा पनि पाठक प्रतिकृया भन्दा बेस हुन्छ । म साहित्य सिद्धान्तको विज्ञ नभएकोले र समिक्षा सिद्धान्तमा पनि खासै जानकारी नभएकोले नगरकोटीको लेखनीको समीक्षा गर्ने दक्षता राख्दैन ।
जस्तै मेरो पूर्वाग्रह त्यस्तै लेखक र लेखकका प्रशंसकको पनि पूर्वाग्रह थियो कि के थियो कसैले पनि शीर्षकमा आपत्ति जनाउनुलाई सहजताका साथ लिएनन् । बरु संकर लामिछानेको ‘एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज’ को प्रसंग अघि सारे । अर्को नपढेको पुस्तक भएकोले बोल्ने ठाउँ नै रहेन । संकर लामिछानेको भूमिका भने पढेको थिएँ । पारिजातको पुस्तकमा उनको भूमिका पढे पश्चात नै हो मैले पुस्तकहरुका भूमिका पनि नछुटाइ पढ्न थालेको । उनले ‘हुन त यो भूमिका कसले पढ्ला र !’ भनेर लेखेको वाक्यले भूमिकामा पनि महत्वपूर्ण कुराहरु आउँछन् भन्ने सोच पलायो । संकर लामिछानेलाई त्यहि भूमिकामा मात्रै चिनेको थिएँ ।
फोसिल पढ्नु अघि नगरकोटिका थुप्रै आधा कथाहरु र थुप्रै पुरा अन्तर्वार्ताहरु पढेँ र हेरेँ । उनको पुस्तक प्रेम, घाट प्रेम, अराजकता प्रेम सबैसँग केहि परिचित भएँ । अराजकता साहित्यिक फाँटको सन्दर्भमा हो । उनलाई नियममा बाँधिएर लेख्न रुची नभएको कुरा उनले पुस्तक छलफलकै क्रममा भनेका थिए । देवकोटालाई पनि कविताको नियमले बाध्थ्यो । तर उनले जसरी तसरी त्यसलाई आत्मसात गरेका थिए । गोपाल रिमालले छन्दमुक्त कविता परम्परा सुरु गरेपछि उनले पनि पागल कवितामा उनको असहजता तोडेर कविता लेखे । पागल कविता उनका छन्दबद्ध कविता जतिकै उत्कृष्ट छन् । अझ त्यसको गहिराइमा जाने हो भने त झनै उत्कृष्ट छ । स्नातक तहको प्रथम वर्षको अनिवार्य अंग्रेजीमा उनको कविताको अंग्रेजी अनुवाद त्यसै पढाइने होइन । त्यसको सार भन्न सक्नुमा हाम्रा प्राध्यापकहरुले आफ्नो बहादुरी ठान्थे । नगरकोटी पनि सायद अलग धारमै उभिन मन पराउने लेखक हुन् । त्यसैले उनको साहित्य प्रति अनि भाषा प्रतिको खरो टिप्पणीले उनलाई छुँदैन । या उनले छुँदैन भनेका मात्रै पनि हुन सक्छन् ।
नगरकोटीसँगको साक्षात्कार सन् २०१२ तिरको कुरा हो । त्यसपछि म बाहिर आएँ र साहित्यमा रुचि हुँदा हुँदै पनि अध्ययनको मौका जुरेन । गत साल देखि कसो कसो फेरी नेपाली र अंग्रेजी साहित्यको अध्ययनम फर्किएँ । पुस्तकहरु अध्ययनको क्रममा शंकर लामिछानेको एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज पनि पढि भ्याएँ । लामिछाने स्वयंलाई पनि उनको साहित्यमा हुने अंग्रेजी विरोध खड्केको कुरा उनको लेखनमै पढ्न सकिन्छ । उनी आफ्नो साहित्यमा अंग्रेजी श्रष्टाको समेत ‘वीर्य’ मिसिएको ठान्छन् । नगरकोटीको हकमा पनि सायद त्यहि होला । लामिछाने सायद अंग्रेजीको कम भन्दा कम प्रयोगका लागी प्रयासरत थिए । नगरकोटीले अंग्रेजी प्रयोगलाई आफ्नो शैली बनाएका छन् । साहित्यमा अंग्रेजीको अनावश्यक प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा कट्टर उभिएर नगरकोटि पढ्ने हो भने नगरकोटीको लेखनीको आनन्द लिन सकिँदैन । उनले प्रचुर मात्रामा अंग्रेजीको प्रयोग गरेका छन् । बदलामा नेपाली शब्द नभेटिएर र नसुहाएर भन्दा पनि लेख्नै मन लागेर लेखेको जस्तो लाग्छ । नभए शीर्षकमा गिद्धहरुको नाच अनि तलतिर ‘भल्चर’को प्रयोग त्यत्रो विधि हुने थिएन । लेखकले चाहे धेरै घटाउन सक्थे ।
नगरकाेटी फरक लेख्छन्र भन्ने भनाइकाे यस्ताे असर परेकाे थियाे कि हरेक फरक साहित्यकाे पठनका क्रममा मलार्इ नगरकाेटी सम्झना अाउँथे । स्यामुएल व्याकेटकाे वेटिङ फर गाेडाेट, इयान म्याकइवानकाे फर्स्ट लभ फर्स्ट राइट्स, काफ्काकाे मेटामाेर्फाेसिस् र कामुकाे द स्ट्रेन्जर लगायतका पुस्तकहरू पढ्दा मलार्इ नगरकाेटीकाे सम्झना अाउँथ्याे । नगरकाेटीलार्इ यति गहिराइमा अनि कुनै सिद्धान्त विशेषका पछाडि चाहिँ भेटेन । सायद त्याे मेराे बुझाइकाे कमीका कारण पनि हुन सक्छ ।
नगरकोटीको पुस्तक पढ्नु पनि एक वर्गमा समावेश हुनु हो । समाजमा कसले के उपभोग गर्छ भन्ने आधारमा उसको हैसियत छुट्टिए जस्तै साहित्यमा कसले के पढ्छ भन्नेले पनि पाठकहरुमाझ एक अर्काको हैसियत छुट्याउने चलन छ । आयातित र ठूला मार्काका वस्तुहरु सम्भ्रान्तले मात्रै प्रयोग गर्छन् । नगरकोटी पनि एक सम्भ्रान्त साहित्य प्रेमीको सौक हो । सम्भ्रान्त सहित्य अध्ययनको हिसाबमा । थुप्रै पढि सकेको पाठक जसले गिद्धहरुको नाचमा योगमाया, मिलेरप्पा, ग्राम्सी, आदिको सन्दर्भ आउँदा निधार खुम्च्याउन पर्दैन । कित आफूलाई सम्भ्रान्त साहित्य अध्येता बनाउन तल्लीन म जस्ताले पढ्नु पर्छ जसले नगरकोटीको एउटा कथा पढ्दा सय पटक गुगल गरेर उनले प्रयोग गरेका पात्रहरुको अस्तित्व खोज्छन् । धेरै भेटिन्छन् पनि ।
Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements by Richard J.F. Day
Milerapa, tibetan monk, famous for his songs and poem about his realization of dharma.
नगरकोटी पढ्दाका पहिला टिपोटहरु यिनै हुन् । योगमाया, मिलेरप्पा, ग्राम्सी, लगायतका पात्र सँगै मेटाफर मानव पनि उनका कथामा प्रवेश गर्छन् । नगरकोटीलाई पढ्ने र नगरकोटीलाई पछ्याउनेले तिनलाई चिन्न उति गाह्रो मान्दैनन् । मलाई समेत त्यो मेटाफोर मानवको वर्णन पढे लगत्तै नगरकोटीकै किताव घाटमाण्डौको गाता सम्झना आएको थियो । उनी स्वयं त्यहि मेटाफर मानवको पहिरन मा बसेका थिए । त्यसै पात्र मार्फत उनले आफ्नो रुपक प्रतिको प्रेम दर्शाएका छन् ।
रुपकको प्रयोग कि त बुझिने बनाउन गरिन्छ कि त नबुझिने बनाउन प्रयोग गरिन्छ । नबुझिने भन्नाले सोझो अर्थमा नबुझिने । रुपकहरु बुझ्न सँधै सहज हुँदैन । कहिले कुन कुराको शाब्दिक अर्थमा जानु पर्ने हो कहिले तिनलाई रुपकका रुपमा बुझ्नु पर्ने हो पाठकलाई अलमल पर्न सक्छ ।
नगरकोटी बुझ्नै नसकिने लेखक पनि होइनन् ।
–गोली मार्नुस् मुचुल्का सुचुल्का
–तर साब !
–गोली मार्नूस् तर सर
–मेरो पिस्तोलमा गोली छैन साब ।
–काँ गयो त ?
–आन्दोलनकारीले लुटे ।
–खोइ आन्दोलनकारीहरु !
–माछा मार्न गए ।
–खोइ माछा ?
–खोलाले बगायो ।
–कुन खोला ? विष्णुमती कि बाग्मती ?
–बाग्मती साब ।
–खोइ बाग्मती ?
–सुक्यो साब ।
(गिद्धहरुको नाच पृ. १७)
नगरकोटिलाई पछ्याउने क्रममै हालसालै पोखरामा भएको साहित्य महोत्सवको श्रब्य–दृश्य सामग्रीहरु पनि सामजिक सञ्जालमा हेर्न भ्याए । स्वैर कल्पना र रुन्चे साहित्य (जो अलि अपमान जनक छ) को बहसमा नगरकोटि र नयनराज पाण्डेयले पनि आ–आफ्ना विचार राखे ।
‘साहित्यमा उडान हुनु पर्छ ।’ नगरकोटी भन्छन् ।
‘उड्दा बुडि आउँलाले भुइँ छुनु पर्छ ।’ नयनराज पाण्डेय प्रतिवाद गर्छन् ।
‘यो बुढि आउँलो बडो डेन्जर चिज हो । आइ युज्ड टु वन्डर ह्वाट इज दिस बुडि आउँला ? म चाहिँ बुडि आउँलै लिएर आकाशमा उड्ने । बुडि आउँला धर्तीमा छोडेर हाउ क्यान आइ फ्लाई इन दि स्काइ ? .. यो बुडि आउँला बडो डेन्जर चिज हो ।’ नगरकोटी हाँस्दै फर्काउँछन् ।
‘चरा जस्तै उडे पनि छायाँ त फेला पार्नु प¥यो ?’ दर्शकदिर्घाबाट आवाज आउँछ । नयनराज मुस्कुराउँछन् अनि नगरकोटी पनि ।
संग्रहका कथाहरु क्रमशः गिद्धहरुको नाच, बरफ, श्लोक, विनिर्वाण, कथार्सिस, पाण्डुलिपि, रिभोल्भर र फोसिल पढ्दै गर्दा चरीको छायाँ प्रशस्तै ठाउँमा भेटियो । फेरि छायाँ भेट्न घाम लाग्नु पर्छ । घाम लागेर मात्रै हुँदैन तलको भुइँ पनि समथर हुनु पर्छ । रुखमा परेको छायाँ देखिँदैन । आँगनमा परेको छायाँ देखिन्छ । घाम सन्दर्भ सामग्रीहरुसम्बन्धी जानकारी हो । भुइँ पाठकको ग्रहणशीलता हो । दुबै भयो भने नगरकोटी नबुझिने हुँदैनन् । छायाँ भेटिन्छ ।
फोसिलमा पनि छायाँ भेटिन्छ । चलनचल्तिका साहित्य जसरी सललल पढ्न गाह्रो अवश्यै हुन्छ । मैले अंग्रेजी पुस्तक पढ्दा भन्दा बढि गुगलको प्रयोग फोसिल पढ्दा गरेँ । मिलेरप्पा, ग्राम्सी, त्यतै भेटिएका हुन् । त्यस अर्थमा किताप पढ्नु नगरकोटिले दावी गरे जत्तिकै सहज नहुनु सक्छ । तर केहि नयाँ कुराहरु चाहिँ पुस्तकले अवश्यै दिन्छ । यथार्थ हो या काल्पिनिक हो छुट्याउन फेरी गुगलेश्वरको शरणमा पर्नुपर्छ ।
समग्रमा अंग्रेजीको मनलागी प्रयोग र शैलीगत क्लीष्टता प्रति आफ्नो पूर्वाग्रह कायम राख्दै फोसिलका बारेमा भन्नु पर्दा यो एक अध्ययन गर्नु पर्ने पुस्तक हो । पढ्नुपर्ने पुस्तकहरुमा धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन । अध्ययन गर्नु पर्ने पुस्तकमा सन्दर्भहरु खोजेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ अनि बल्ल स्वाद पाउन सकिन्छ । त्यो चुट्किला सुनेर अरुको हाँसो देखेर हाँस्नु र बुझेर हाँस्नुमा फरक भए जत्तिकै सन्दर्भ बुझेर पढ्नु र सतही रुपमा पढ्नुमा उत्तिकै अन्तर हुन्छ । त्यस्तै नगरकोटीलाई पनि अनुरोध के भने मनोरञ्जनका लागी लेखिएकै कुरा बुझ्न घण्टौँ घोत्लिनु प¥यो भने त्यसले उस्तो मज्जा दिँदैन । नबुझिने चुट्किला पनि के चुट्कििला ? जगदीश घिमिरेले भने जस्तै ‘नबुझिने लेख्नु र नसुनिने बोल्नु उस्तै हो ।’ अझ उनकै भाषामा भन्नु पर्दा ‘नेपाली साहित्य इज मेड अफ पाठकस्, बजार्स ।’
Fossil Nepali Book Review Kumar Nagarkoti kumar nagarkoti book reviews Raman Paneru कुमार नगरकोटी फोसिल फोसिल Review
लेखक संग ५ प्रश्न : Raju Baral